ड्राइभरले खिचेको यो फोटो बन्यो अन्तिम, फोटो खिचेको दुई मिनेटमै गयो ज्यान
काठमाडौं। हिजो खिचिएको यो फोटो नदीमा पौडी खेलीरहेका यी युवकहरुको अन्तिम फोटो बन्न पुग्यो । यो फोटो खिचेको २ मिनेटमै यो समूहका तीन जनाको बगेर मृत्यु भएको छ । भारतको उत्तर प्रदेशको प्रतापगढमा बकुलाही नदीमा पौडी खेल्दै सेल्फी खिच्ने क्रममा…
क्यामेराअगाडि नै आमाछोराले यसरी चोरे शोरुमबाट गहना (सिसिटिभी फुटेज)
काठमाडौं। गहनाको एक शोरुममा आमाछोरा भएर आएका दुई व्यक्तिले गहनाको चोरी गरेको सिसिटिभी फुटेज पछिल्लो समय सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ । यो घटना भारतको अमृतसरमा भएको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । अमृतसरको मालरोडमा सुनको शोरुममा आएका एक युवक र…
भारतलाई चीनले भन्यो, हाम्रा सैनिक पनि कालापानी र कश्मीरमा घुसे के होला ?
एजेन्सी । डोकलाम मुद्दालाई लिएर चीनले फेरि भारतलाई धम्की दिएको छ। चीनले धम्की पूर्ण भाषामा भनेको छ, यदी हामी कालापानी र कश्मीरमा घुसे के होला ? डोकलाम मुद्दालाई लिएर चीनले भारतलाई सजक बनाइरहेको छ। केही दिनअघि पनि चीनले भारतीय प्रधानमन्त्री…
अमेरिकाको गुआम द्वीपमा आक्रमण गर्ने तयारीमा उत्तर कोरिया
बीबीसी। उत्तर कोरियाले अमेरिकी प्यासेफिक क्षेत्रको गुआम द्वीपमा मिसाइल आक्रमण गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको चेतावनी दिएको छ। गुआम पश्चिमी प्रशान्त महासागरको एक अमेरिकी द्वीप हो। उत्तर कोरियाको सरकारी संचारमाध्यमले सो चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। उत्तर कोरियाली सरकारी संचार माध्यमले…
फोटोग्राफरले ज्यान जोखिममा राखेर खिचेका अफगानिस्तानका ९ फोटोहरु
एजेन्सी। अफगानिस्तान यस्तो देश हो जहाँ सशस्त्र संघर्ष सामान्य भइसकेको छ । यहाँ बाहिरी शक्ति वा आन्तरिक विद्रोहीको सशस्त्र संघर्ष भइरहेकै छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाका फोटोग्राफर स्टीभ म्याकरीले अफगानिस्तानको यात्रा गरेर यहाँका केही फोटो संकलन गरेका छन् । स्टीभ…
मजदुरले बचाएको जापानको कोकुरा शहर, यहाँ खसालिँदै थियो ‘फ्याट म्यान’ परमाणु बम
एजेन्सी । जापानको नागासाकी शहरमा परमागाु बम खसालिएको आज ७२ वर्ष पूरा भयो । तर यो बम (फ्याट म्यान) कोकुरा शरमा खसाल्ने अमेरिकाको तयारी थियो । ९ जुलाई १९४५ को दिन कोकुरामा खसाल्ने तयारी गरिएको बम यहाँ मौसम खराब भएपछि…
चीनमा ७.० म्याग्च्यिुडको भूकम्प
बेएजिङ (चीन)। चीनको सिचुवान प्रान्तमा ७.० मयाग्च्यिुडको भूकम्प गएको चिनियाँ भूकम्प मापन केन्द्र (सिइएनसी)ले जनाएको छ। स्थानीय समय अनुसार मङ्गलबार साँझ ९ः १५ बजेको समयमा गएको भूकम्पको प्रभाव खासगरी जिउझाइगाओ क्षेत्रमा परेको बताइएको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु ३३.२ डिग्री उत्तरी…
सेनाको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा सत्ताइस जनालाई मृत्युदण्ड
बग्दाद इराक। इराकको एक अदालतले सन् २०१४ मा इराकी शहर तिक्रितलाई विद्रोहीले नियन्त्रणमा लिएपछि करिब एक हजार ७०० सेनाको हत्या गरेको अभियोगमा इश्लामिक स्टेट ९आइएस० समूहमा आवद्ध २७ अभियुक्तलाइ मृत्युदण्डको सजाँए सुनाइएको न्यायलयका प्रवक्ताले मङ्गलबार बताएका छन् । “ केन्द्रिय…
७ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प, क्षतिको विवरण आउन बाँकी
बेइजिङ, चीन । चीनको सिचुवान प्रान्तमा ७० म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको चिनियाँ भूकम्प मापन केन्द्र सिइएनसीले जनाएको छ । स्थानीय समय अनुसार मङ्गलबार साँझ ९ः १५ बजेको समयमा गएको भूकम्पको प्रभाव खासगरी जिउझाइगाओ क्षेत्रमा परेको बताइएको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु ३३।२…
पुलिसकी श्रीमतीलाई फोन गर्दा, दिनदहाडै बीच बजारमा हत्या (सिसिटिभी भिडियोसहित)
पुलिसकी श्रीमतीलाई रातीराती फोन गर्ने युवकलाई दिनदहाडै बीच बजारमा लखेटी लखेटी मारिएको छ । मृतक ती युवकले कोचिङ पढाउने गरेको बताइएको छ । मृतक सन्दिप भादराले सोमबार बिहान मात्रै आफूलाई हत्या गर्ने धम्की दिइएको भन्दै प्रहरीमा सुरक्षाको लागि निवेदन दिएका…